Ụbọchị My Pet » 5 Atụmatụ na-adị ndụ anya Mmekọrịta – Mmụta Edition
emelitere ikpeazụ: Dec. 02 2020 | 3 min agụ
Summer oge bụ a mara mma nke a na-amụrụ adị. Obi abụọ adịghị ya. Ị na-ichefu banyere nnọọ eziokwu nke akwụkwọ, zuru a obere, ga-esi gị tan na, na-aṅụ fruity na-aba n'anya nke coconuts, na reconnect gị na ezinụlọ gị na n'obodo ndị enyi. Ọ niile na-ada mara mma ebube n'ezie.
Ewezuga otu obere zuru ezu ... ị na-eche na-ezughị ezu. Ị na-dị ka a cone-enweghị ice ude. Dị ka Pizza enweghị cheese, dị ka Miley Cyrus enweghị a naa, a owu na-ama Bonnie enweghị gị Clyde.
M adịghị ekwu okwu banyere ịbụ-iche site na gị fraternal ejima; M na-ezo aka ike oge na a mmekọrịta maara dị ka "anya nkewa". Ke ama okodu asatọ ebube ọnwa n'ụlọ akwụkwọ na gị hụrụ, na ị ma nwere laghachi n'ụlọ gị gị na steads na-amụta ụdọ nke ịbụ iche ma na-ahụ pụrụ iche ebua.
Ị nwere ike ọ dị mfe a ga-akpa ndị mara mma girl ụzọ na-esote onye mere na-aga otu akwụkwọ, ma ọ bụ i nwere ike iche iche site na kilomita, oké osimiri, ma eleghị anya ọbụna na kọntinent. Ọ na-emekarị siri ike mgbe ụfọdụ ma ọ bụ ọ dịghị mfe feat ịnọgide na-enwe njikọ na deere n'elu N'ezie nke ụlọ akwụkwọ nke afọ.
Ọfọn ezi ihe m ebe a n'ihi na ị.
Mbụ, nkwa bụ isi.
Ọ bụ ihe ijuanya na ọ bụ naanị ndị na-raara onwe ha nye ha na mmekọrịta ha ga-eme ka ọ na-ikpeazụ. Mmụọ. Heck a na-aga n'ihi na nso anya mmekọrịta kwa. Ghara inwe ike ịhụ onye ọ bụla ọzọ na kwa ụbọchị na-achọ mgbe nile na a na-agụsi uche nke ịnụ ọkụ n'obi na-atachi obi iguzosi ike n'ihe si n'akụkụ abụọ.
Were uru nke niile oké technology, Ngwa na gizmos.
Anyị na-ebi a dijitalụ ụwa nke kọmputa, cell igwe na Ubiquitous technology. Back na n'ụbọchị ọ na-eri a uba nnọọ na-akpọ onye na telifon ... n'oge anyị nwere ike skype na onye ọ bụla n'ụwa n'ihi na nnọọ free. Anyị nwere ọ dị mfe, otú e nwere n'ezie kwesịrị-enweghị ihe ngọpụ. Technology bụ oké ngwá ọrụ na-eji, ma ọ bụ a nọgide na-ide ozi n'ekwe ntị na mkparịta ụka, na-ekwu okwu n'elu ekwentị, otu n'ime ndị na-elekọta mmadụ media outlets ma ọ bụ Skype. Jiri ya na-eji ya na-.
Anya na gị na gị ịrịba ama ndị ọzọ na-emepụta ohere unu na-egosi ụfọdụ creativity na nkà. Jiri n'ezie akwụkwọ na a n'ezie pen na zipu a akwụkwọ ozi ochie gaferela ụzọ, iju gị n'anya na okooko osisi ha n'aka-ha n'ulo (ezo aka ọgụgụ 2 na iji online si a Nwere Ifuru ụlọ ahịa) ma ọ bụ na-eme kpochapụwo anya nleta ọ bụrụ na o kwere omume. Etinye gị echiche okpu on na-egosi ụfọdụ ezi n'echiche.
Ịmakụ oge ị na-eme ga-esi na-eji anọkọ ọnụ.
N'ihi na ị ga-enwe iche ruo ogologo oge, ọ bụrụ na ị jikwaa ga-esi na a nleta na-aga na ụfọdụ ahụmahụ ọ ga-abụ ịrụ ụka adịghị ibu pụrụ iche. Ana m ekwu na ọ ga-adị ka ihunanya idaha ke mmiri ozuzo si Akwụkwọ ịde ihe, ma ọ ga-mara mma nso.
Cheta na ọ bụghị na njedebe nke ụwa.
Ya o nwere ike na-ike mgbe ụfọdụ na ị chọrọ curl na nwa ebu n'afọ na ọnọdụ na ibe ákwá (M na e nwere- ihere adịghị) ma cheta na anya bụ na nzuzo ike. N'ịbụ iche onye gị ga-enyere gị akpọrọ oge gị ọnụ ọzọ na ị nwere ina-eji ya mee elu mee ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Ya mere mma ma ọ bụrụ na ị na-amalite na-eme ugbu a nri?
Ka ise a Atụmatụ eme ihe dị ka ịhụnanya gị guru maka okpomọkụ ọnwa na ị ga-adị mma. Ị na-eleghị anya ga-jụrụ a ugboro nde "ebe bụ gị ọzọ na ọkara?"Na" na-na ị ka na-akpa what's-ya-aha?"Ma ugbu a, ị pụrụ iji obi ike zaa" M na mgbe nile nkwurịta okwu na ya / ya ha, ha na ugbu a na n'ụlọ ha "na" ee, ị nzọ m ".